१ Questions प्रश्नहरू तपाईंले प्लेटफर्म चयन गर्नु अघि उनीहरूको एपीआईको बारेमा सोध्नु पर्छ Martech Zone
एक राम्रो मित्र र सल्लाहकारले मलाई प्रश्न सोधे र म यो पोष्टको लागि मेरो प्रतिक्रियाहरू प्रयोग गर्न चाहान्छु। उसका प्रश्नहरू अलि बढी एक उद्योग (ईमेल) मा केन्द्रित थिए, त्यसैले म सबै एपीआईहरूमा मेरो प्रतिक्रिया सामान्यीकरण गर्छु। उनले सोधेछन् कि कुन कम्पनीले विक्रेतालाई एपीआईको बारेमा छनौट गर्नु पर्छ छनौट गर्नु अघि।
तपाईंलाई एपीआई किन चाहिन्छ?
An अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग ईन्टरफेस (एपीआई) इन्टरफेस हो जुन एक कम्प्युटर प्रणाली, पुस्तकालय, वा अनुप्रयोगले प्रदान गर्दछ सेवाहरूको लागि अनुरोधहरू यसलाई अन्य कम्प्युटर प्रोग्रामहरू द्वारा बनाइने अनुमति दिनको लागि, र / वा तिनीहरू बीच डाटा साटासाट गर्न अनुमति दिन।
जसरी तपाईंले यूआरएल टाइप गर्नुभयो र वेब पृष्ठमा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुभयो, एपीआई एक विधि हो जहाँ तपाईंको प्रणालीहरूले अनुरोध गर्न सक्दछ र उनीहरू बीच डाटा समक्रमण गर्न पुनः प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सक्दछ। कम्पनीहरूले डिजिटल रूपान्तरण आफैलाई रूपान्तरण गर्न को लागी, एपीआई को माध्यम बाट स्वचालित कार्यहरू संगठन भित्र कार्यकुशलता सुधार गर्न र मानव त्रुटि लाई कम गर्न एक उत्तम तरिका हो।
एपीआईहरू विशेष गरी मार्केटिंग अनुप्रयोगहरूमा अटोमेशनका लागि केन्द्र हुन्। जब एक बृहत विक्रेताको लागि बृहत विक्रेताको लागि किनमेल गर्दा चुनौतीहरू मध्ये एक हो एपीआई के विकास संसाधनहरू र खर्चहरू प्राय: सोचाइ पछि हुन्छन्। मार्केटिंग टीम वा सीएमओले एक अनुप्रयोगको खरीद ड्राइभ गर्न सक्दछ र कहिलेकाँही विकास टोलीले धेरै इनपुट प्राप्त गर्दैन।
एपीआई मार्फत प्लेटफर्मको एकीकरण क्षमताहरूको खोजीलाई साधारण प्रश्न भन्दा बढि आवश्यक पर्दछ, के त्यहाँ एक एपीआई छ?
यदि तपाईं एक कमजोर समर्थित या दस्तावेज एपीआई को साथ एक आवेदन को साथ साइन इन गर्नुभयो, तपाईं आफ्नो विकास टोली पागल ड्राइव जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईंको एकीकरण सम्भावित कम छ वा पूरै असफल हुनेछ। सही विक्रेता खोज्नुहोस्, र तपाईंको एकीकरणले काम गर्दछ र तपाईंको विकास मानिसहरू सहयोग गर्न खुशी हुनेछन्!
तिनीहरूको एपीआई क्षमताहरूमा अनुसन्धान प्रश्नहरू:
फिचर ग्याप अनुप्रयोग परिचय प्रोग्रामिंग ईन्टरफेस मार्फत उनीहरूको प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको कुन सुविधाहरू उपलब्ध छन् पहिचान गर्नुहोस्। एपीआईसँग के सुविधाहरू छन् जुन यूआई छैन र यसको विपरित छ?
स्केल - सोध्नुहोस् कि कति कलहरू गरीरहेका छन् तिनीहरूको एपीआई दैनिक के तिनीहरूसँग सर्वरहरूको समर्पित पोखरी छ? मात्रा अविश्वसनीय रूपमा महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईं यो पहिचान गर्न चाहानुहुन्छ कि एपीआई विचारविहीन हो वा वास्तवमा कम्पनीको रणनीतिको अंश हो।
दस्तावेज - एपीआई कागजात को लागी सोध्नुहोस्। यो मजबूत हुनुपर्दछ, एपीआईमा उपलब्ध सबै सुविधाहरू र भ्यारीएबललाई हिज्जे।
सामुदायिक - सोध्नुहोस् कि उनीहरूसँग एक अनलाइन विकासकर्ता समुदाय छ कि छैन र अन्य विकासकर्ताहरूसँग विचार साझा गर्नका लागि। विकासकर्ता समुदायहरू चाँडै र प्रभावकारी रूपमा तपाईंको विकास र एकीकरण प्रयासहरू सुरू गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुन्। कम्पनीमा 'एपीआई केटा' को लाभ उठाउनुको सट्टा, तपाईले उनीहरूका सबै ग्राहकहरू चलाउदै हुनुहुन्छ जुन उनीहरूको समाधान एकीकृत गर्न पहिले नै परीक्षण र त्रुटिहरू भएका छन्।
REST बनाम साबुन - कस्तो प्रकारको सोध्नुहोस् एपीआई तिनीहरूसँग ... सामान्यतया त्यहाँ REST API र वेब सेवा (SOAP) API हरू छन्। ती दुबै विकास हुन सक्छ। या त सँग एकीकरणका फाइदाहरू र श्रापहरू छन् ... तपाईलाई के थाहा छ तपाईको एकीकरण स्रोतहरू (IT) क्षमताहरूसँग।
भाषा - कुन प्लेटफर्महरू र अनुप्रयोगहरूसँग उनीहरू सफलतापूर्वक एकीकृत भएका छन् सोध्नुहोस् र सम्पर्कहरू अनुरोध गर्नुहोस् ताकि तपाईं ती ग्राहकहरूबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि एकीकृत गर्न कत्ति गाह्रो भयो र API कसरी चल्दछ।
सीमितता - सोध्नुहोस् कि विक्रेतासँग प्रति घण्टाको संख्यामा केहि सीमाहरू छन्, प्रति दिन, प्रति हप्ता, आदि। यदि तपाईं स्केलेबल विक्रेताको साथ हुनुहुन्न भने, तपाईंको वृद्धि ग्राहक द्वारा सीमित हुनेछ।
नमूनाहरू - के तिनीहरू सजिलैसँग सुरू गर्न कोड उदाहरणहरूको लाइब्रेरी प्रस्ताव गर्छन्? धेरै कम्पनीहरूले SDK (सफ्टवेयर विकास किट्स) बिभिन्न भाषाहरू र फ्रेमवर्कहरूको लागि प्रकाशित गर्छन् जुन तपाईंको एकीकरण टाइमलाइनलाई मद्दत गर्दछ।
स्यान्डबक्स - के तिनीहरूले तपाईंको कोड जाँच गर्नका लागि गैर-उत्पादन अन्तिम पोष्ट वा स्यान्डबक्स वातावरण प्रस्ताव गर्छन्?
संसाधन - सोध्नुहोस् कि यदि उनीहरूको कम्पनी भित्र एकता स्रोतहरु समर्पित छ भने। के तिनीहरूसँग एकीकरणका लागि आन्तरिक परामर्श समूह उपलब्ध छ? यदि हो भने, केहि घण्टा सम्झौतामा हाल्नुहोस्!
सुरक्षा - कसरी ती एपीआई को उपयोग गरेर प्रमाणीकरण गर्छन्? के यो प्रयोगकर्ता प्रमाणपत्र, कुञ्जी, वा अन्य विधिहरू छन्? के ती आईपी ठेगाना द्वारा अनुरोध प्रतिबन्ध गर्न सक्दछ?
Uptime - सोध्नुहोस् तिनीहरूको के एपीआई अपटाइम र त्रुटि दर हो, र जब तिनीहरूको मर्मत समय छ। साथै, उनीहरूका वरिपरि काम गर्ने रणनीतिहरू महत्त्वपूर्ण छन्। के तिनीहरूसँग आन्तरिक प्रक्रियाहरू छन् जुन पुन: प्रयास गर्नेछन् एपीआई घटनामा कलहरू अर्को प्रक्रियाको कारण रेकर्ड अनुपलब्ध छ? के यो त्यस्तो कुरा हो जुन उनीहरूको समाधानमा ईन्जिनियर गरिएको छ?
SLA - तिनीहरू एक छ सेवा स्तर सम्झौता कहाँ अपटाइम्स wards 99.9..XNUMX% को माथि हुनुपर्छ?
Roadmap - भविष्यका कुन सुविधाहरू उनीहरूको एपीआईमा समावेश गर्दै छन् र अपेक्षित डेलिभरी कार्यक्रमहरू के हुन्?
एकीकरण - कुन उत्पादित एकीकरणले उनीहरूको विकास भएको छ वा तेस्रो-पार्टीहरूको विकास भयो? कहिलेकाँही कम्पनीहरूले सुविधाहरूमा आन्तरिक विकासको पूर्वानुमान गर्न सक्दछन् जब अर्को उत्पादित एकीकरण पहिले नै अवस्थित छ र समर्थित छ।
यी प्रश्नहरूको कुञ्जी त्यो हो कि एकीकरणले तपाईंलाई प्लेटफर्ममा 'विवाह' गर्दछ। तपाईं कसैको बिहे गर्न चाहनुहुन्न उनीहरूको बारेमा जति धेरै जान्न पाउनु हुन्छ, हैन? यो केवल के हुन्छ जब मान्छेहरूले उनीहरूको एकीकरण क्षमताहरूको ज्ञान बिना प्लेटफर्म खरीद गर्छन्।
एपीआई पछाडि, तपाइँले के जान्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरूसँग के के के अन्य एकीकरण श्रोतहरू हुन सक्छन्: बारकोडिंग, म्यापि,, डाटा सफा गर्ने सेवाहरू, आरएसएस, वेब फार्महरू, विजेट्स, औपचारिक पार्टनर एकीकरण, लिपि ईन्जिन, एसएफटीपी ड्रपहरू, आदि।
टैग: APIएपीआई कागजातएपीआई मूल्यांकनएपीआई सुविधाहरूएपीआई प्रश्नहरूएपीआई अनुसन्धानअनुप्रयोग प्रोग्रामिंग ईन्टरफेसविशेषताहरुबाँकीस्यान्डबक्सsdkसेवा स्तर सम्झौता
कसरी डीफेक टेक्नोलोजी प्रभाव मार्केटिंग हुनेछ?
मार्स 29, 2021 मा 11: 44 एएम
सँधै डग जस्तो उत्कृष्ट सामग्री!
मार्स 29, 2021 मा 11: 47 एएम
धेरै धेरै धन्यवाद, जोन! दयालु नोट छोड्न समय लिने कसैको जहिले पनि कदर गर्नुहोस्।
अगस्ट 5, 2021 मा 3: 37 AM